Maxaad kala socotaa shirkadaha ammaan ee ka howlgala Muqdisho? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaad kala socotaa shirkadaha ammaan ee ka howlgala Muqdisho?
A warsame 28 April 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka Amniga Qaranka Soomaaliya C/kariim Xuseen Guuleed ayaa shalay baarlamaanka ka hor sheegay arrin la yaab leh, taasoo ku saabsan tirada shirkadaha ammaan ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho ee isugu jira Soomaalida iyo ajaanibta.
Wasiir Guuleed ayaa baarlamaanka u sheegay iney Muqdisho ka howlgalaan 22 shirkadood oo ammaan, kuwaasoo heysta hub ka madax banaan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Wuxuu sheegay wasiirku in 18 ka mid ah shirkadahaas yihiin kuwa laga leeyahahy gudaha dalka, taasoo ka dhigan iney leeyihiin dad Soomaali ah, halka 4-ta kale ay yihiin sida uu yiri shirkado caalami ah, oo ka dhigan iney yihiin ajaanib.
“Aan ku saxee dalka ma joogan 23 shirkadood oo ammaan ee waa 22, 18 ka mid ah waxaa laga leeyahay gudaha, 4-ta kalana ay yihiin shirkado caalami ah” ayuu wasiir Guuleed ugu jawaabay xildhibaan baarlamaanka ku weydiiyey su’aal la xiriirrtay iney dalka ka howlgalaan 23 shirkadood oo waxa ay qabtaan la garan la’yahay.
C/kariim Xuseen Guuleed ayaa sheegay in intii uu xilka hayey la diiwaan geliyey 4 ka mid ah shirkadahan, halka 18-ka kalana la diiwaan geliyey ka hor inta uusan wasaaradda qaban.
Wasiirku ma sheegin waxa shirkadahaan ka qabtaan dalka, wuxuuse xusay in iyadoo la eegayo dhibaato shirkado nuucaan ah ka geysteen Ciraaq iyo Afgaanistaan ay dib u eegis ku sameynayaan howlahooda.
Lama sheegin dalalka ka yimaadeen 4-ta shirkadood ee ajnabiga ah, sidoo kale wasiirku ma sheegin cidda ay shirkadahaasi amaankeeda sugaan.
Wasiirrada difaaca Soomaaliya iyo Sudan oo ku shiray Khartuum